अनलाइन कक्षाका समस्याहरु ! - Online Sajha	Online Sajha
आजको यो विषम परिस्थितिलाई नियालेर हेर्दा यो प्रक्रिया अत्यन्तै उपयोगी र विकल्पको रूपमा रहेको पनि छ। यो भन्दा उपयोगी विकल्प अरु कुनै पनि छैन अनलाइन कक्षा आज रहरले होइन । बाध्यता दिनुपर्ने भएको छ ।
विद्यार्थीहरुलाई भौतिक रूपमा उपस्तिथित भएर कक्षा सञ्चालन गर्ने रहर र इच्छा हुँदाहुँदै पनि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले गर्दा निकै अप्ठ्यारो पारेको छ।
भौतिक रूपमा विद्यालयमा गएर अध्ययन क्रियाकलाप अगाडि बढाउने वातावरण नभएको पनि धेरै भैसकेको छ। यो वातावरण सहज कहिले हुन्छ । अझै केहि टुंगो लागेको छैन दिनप्रतिदिन संक्रमणदर बढेको छ ।
धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ सुरक्षा सर्तकता अपनाउन अत्यन्तै आवश्यकता छ । सबै जनमानसहरुको जीवनस्तर त्रासै–त्रासमा बितेको छ । अझै भन्ने हो भने, सार्क राष्ट्रहरुमध्ये सबै भन्दा बढी संक्रमणको जोखिम नेपालमा रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
कोरोना महामारीले गर्दा कतिपय विद्यार्थीलाई राम्रो पनि भएको छ । तर मेहनत बिना नपढि, परिक्षा नदिएरै पास गराउने प्रविधि भने गलत हो । शिक्षा क्षेत्रको लागि यो रहर होइन देशमा भित्रीएको महामारीले गर्दा सिर्जना गरेको बाध्यताको परिस्थिति भएको छ।
तर मेरो भने अनलाइन कक्षाको बारेमा बुझाई अलि फरक छ। मेरो यो बुझाई ,धारण तपाईहरु सबैसँग नमिल्न पनि सक्छ ।अनलाइन कक्षाले गर्दा मेरो मनमा अनेकौं प्रश्न उठ्छ? जसको असर राम्रो वा नराम्रो दुवै हुन सक्छ ।
विभिन्न विरोधाभाषका वीचमा पनि नेपालमा अनेकौँ प्रविधिहरु जमिसकेका अर्थात विकास भैसकेको देखिन्छ । विद्युतको प्रसारणलाई जताततै तानिएको छ । तर यसको प्रभाकारी विकास भने हुन सकेको छैन । लोडसेडिङ ब्ल्याकआउट हुँदा देश अझै अँध्यारोमै रहिरहेको देखिन्छ ।
नेपालको परिवेशमा हेर्दा प्रविधिको पनि निकै समस्या रहेको छ। कहिले विजुलीको समस्या, कहिले नेटर्वकको समस्या कहिले अरु समस्या यस्ता धेरै समस्यहरु झेल्नुपरेको छ ।
अनलाइन कलासले गर्दा शहरी क्षेत्रको समस्या भनेको विद्युतको मात्रै होला । तर ग्रामीण क्षेत्रका गाउँबस्तीमा बस्नेहरुमा सञ्चार क्षेत्रका धेरै समस्याहरु छन । यस्ता समस्याको के कुरा गरौँ ? जहाँ फोन गर्ने रुख चढनु पर्छ । अग्लो—अग्लो डाडाँ काडाँ खोज्दै हिडनुपर्छ।अब हामी आफैले मुल्यांकन गरौँ त्यहाँका विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन कलासले सिकाई क्रियाकलापमा सहयोग कसरी गर्छ ?
यस्तो भन्दा कतिपयलाई अनौठो लाग्न सक्छ किनभने आज सामाजिक संजाल सबैको घर–घर, बस्ती–बस्ती, हात–हात र भान्सा–भान्सा पुगेको छ। यसबाट धेरैलाई लाभ मिलेको छ । तर केहीलाई समस्या पनि थपेको छ ।
यस्तो खालको ज्ञानले गर्दा भविष्यको कुनै ठेगाननै छैन । त्यसैले आजका पुस्ताहरु सिकाई क्रियाकलाप तिर आकर्षक बनाउन जरुरी छ । टिकटक, गेइम् , च्याटमा व्यस्त होइन । त्यसैले अनलाइन कक्षाको नाममा हुन सक्ने यस्ता समस्याहरुलाई ध्यानदिन आवश्यक देखिन्छ ।
म आफैलाई पनि अनलाइन कक्षाले धेरै प्रभाव पारेको छ पढ्नलाई कलासमा जोडिनाले दिनभर फेसबुक, टिकटक हेर्नमै ठिक भएको छ। न पढाई भने जस्तो भएको छ। न त पढेको बुझिन्छ त्यसैले बेलैमा सोच्न जरुरी छ। नत्र भोलि यसले समस्यालाई जटिल बनाउन सक्छ । यसको मतलब यो होइन कि प्रविधिको प्रयोग नै गलत छ । यसको मतलब यो कि प्रगतिको प्रयोग सहि तरिकाबाट गर्नु पर्छ।